७ बार मध्ये यी बार जन्मेका व्यक्ति हुन्छन् धेरै भाग्यमानी ! तपाईको राशि हुन हो ? हेर्नुहोस् … – Sandesh Press
हरेक व्यत्तिको जन्म सात बारे मध्ये एक दिन हुने गर्छ । सबै मानिसको जन्म कुन्डली जन्मबार र समय अनुसार निर्माण गर्ने गरिन्छ । जन्मबार र जन्मेको समय निकै महत्वपूर्ण हुने गर्छ । ज्योतिष शास्त्र अनुसार जन्मेको बारलाई ग्रहले निकै प्रभाव पारेको हुन्छ । आइतबारको दिन सूर्य ग्रहको भने सोमबार चन्द्र ग्रहको हो ।
मंगलबार मंगल ग्रहको हो भने बुधबार बुध ग्रहको हुन्छ । यस्तै बिहिबार वृहस्पतिको हुन्छ भने शुक्रबार शुक्र ग्रहको हुन्छ । शनिबारको कारक ग्रह पनि शनि नै हो । यसरी जन्मबार र समयलाई ग्रहले धेरै प्रवाभ पारेको हुन्छ । ग्रहले आयआर्जनमा निकै प्रभाव पार्ने गर्छ । तयसैले आज हामी तपाईहरुलाई कुन बार जन्मेका व्यक्तिहरुले कति सम्पति कमाउँछन् भन्ने बारे जानकारी दिन गइरहेका छौँ ।
सोमबार : बोलिमा निकै मिठास भएका व्यक्तिहरु सोमबार जन्मेका हुन्छन् । यस दिन जन्मने व्यक्तिको भागमा दुख सुख बराबर जस्तै हुने गर्छ । उनीहरुमा निकै कला गला शिक्षामा पनि अगाड हुने भएकाले बहादुर हुने गर्छन् । उनीहरुको लागि ९, १२, २७ वर्षमा निकै कष्ट बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । सोमबार जन्मने व्यत्तिलाई श्वासप्रश्वासको रोग लाग्ने सम्भावना रहेको हुन्छ ।…
Prevअबको ३ दिनसम्म देशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना
Nextकाठमाडौँ आउदै हुनुहुन्छ ? काठमाडौ आउन र छोड्न चाहनेहरुका लागि लागु भयो यस्तो नयाँ नियम,
२४ घण्टाभित्र तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, फोटो छोई ॐ लेखि सेयर गरौं !!!
लक्ष्मीले बताएका ती पाँच प्रकारका व्यक्ति, जसको घरमा धनको बास हुँदैन :